abadala abaningi bakhetha ukulandela ukuchitha ubudala emakhaya abo ubudala phakathi kwezingange zalo. Nokho, kwenzeka ukuthi umuntu osekhulile ayinakho izingane noma eziseduze onganikeza ukunakekelwa efanele. Kulokhu, nje kudingeka azi ukuthi angasilawula kanjani ekhaya lasebekhulile.
Ukubhaliswa e somphakathi
Minyaka yonke iqoshwe abantu enesizungu asebekhulile abangasakwazi ukuze bazondle ngokwabo impilo enhle. Okuwukuphela kwendlela yokuphuma - kungcono ekhaya lasebekhulile. Yiqiniso, ngeke sikwazi ukusho ukuthi isimo sempilo khona ezingeni eliphezulu kakhulu. Nokho, izisebenzi ngokunakekela ezidingekile njalo guest. Futhi ungakhohlwa ukuthi zokuxhumana nabanye abantu, futhi, ufeza indima ebalulekile kakhulu eminyakeni yokuguga.
Indlela ukungena ekhaya lasebekhulile, kungatholakala izidumbu zokuvikeleka komphakathi endaweni lapho uhlala khona. Kube uzodinga ukubhala isicelo bese uhambisa iphakethe kwemibhalo ukubhaliswa.
Yini imibhalo kudingeka:
Passport ka umuntu ofake isicelo.
umshwalense wezempilo - yokuqala.
Uma kungukuthi unokukhubazeka, kuphoqelekile uhlinzeke isitifiketi.
Lapho wonke amaphepha adingekayo, kufanele kudlule wezenhlalakahle ayovulelwa ngabo ukuhlola zonke. A umsebenzi okhethekile lapho duty hlola izimo zokuphila, okuyinto umhlalaphansi, bese, uma unezindaba izihlobo bayonikezwa. Uma kuqinisekiswa ukuthi umuntu omdala ayikwazi ukuba azinakekele bebodwa, bese-ke kuchazwa endlini boarding, uzonikezwa umbiko kanye nokudluliselwa kwazo ungenisile lapha yini.
Ngubani ongathola ekhaya lasebekhulile
Ngaphambi uthola ekhaya lasebekhulile, qiniseka ukuthi ugcwalise lemibuzo izidumbu lukuphepha emphakathini futhi ukunikeza iphakethe egcwele imibhalo edingekayo. Akhethwe kumele sihambisane nalezi zidingo ezilandelayo:
isigaba Age. Abesilisa kumelwe okungenani sibe neminyaka engu-60 abesifazane - okungenani 55.
Ukuba khona iqembu lokuqala nelesibili ukukhubazeka, kuqinisekiswa isitifiketi.
Ukusungulwa lolu hlobo ingenziwa abakhubazekile iqembu lesibili, noma labo abahola impesheni abahlushwa komqondo senile. Guardian noma isihlobo kuyodingeka ngaphezu yesicelo kanye nezincwadi ukuhambisa isitifiketi udokotela ukuba khona, okufakazela sitholakele impesheni.
Kuye ngezinga of ukukhubazeka noma degree yokukhubazeka bayonikezwa kumele banakekelwe. Icala elinye nelinye kubhekwa sicabangela izici eziningi yesibili.
Ukukhokhwa ahlala ekhaya lasebekhulile
Ezimweni eziningi, impesheni zithunyelwe State ekhaya lasebekhulile. Kanjani lapho, ngubani uzokhokha for ukuhlala kwakho - zonke lezi zinto nezinye izindaba elicacisiwe neziphathimandla zikamazisi.
Kukhona zimo ezimbili eziyinhloko:
kokuhlala kwawo lithathe umhlalaphansi okhokhela ngokuzimele nempesheni imbala. Ngokuvamile ukhokhe u-75% lemali, omunye engu-25% zinikwa wezandla zomuntu.
Kungenzeka umuntu owayesethathe umhlala-unezingane, kodwa bahlala phesheya futhi abakwazi ukunikeza ukunakwa nokunakekela umzali. Ukukhokhwa yokuhlala ekhaya lasebekhulile Kulezo zimo kokwenza eziseduze.
Ubani uya impesheni amafa
I nokulungisa amaphepha adingekayo ukwazi hhayi kuphela ukuthi ungathola kanjani ekhaya lasebekhulile, kodwa futhi ngubani ezophatha impahla owayesethathe umhlala-phansi. Kukhona lezi zimo ezintathu:
Kuleso simo, uma sithola umuntu osekhulile enabantwana noma ezinye izihlobo eziseduze, anesizathu ilungelo bachithe impahla, okuyinto uzohlala.
Uma impesheni ayinalutho, kungaba badlulise impahla noma ubucebi egibela endlini ukuphila kuyo. Kuyoba ukukhokhela lezi zindleko zokunakekelwa yayo futhi uhlale ekhaya lasebekhulile.
Kuleso simo, uma impesheni ayinakho izihlobo futhi akekho wanika impahla yakhe, isimo unelungelo wokuba kuthathwe zonke izimpahla zabo.
impesheni Okuyimfihlo - kweminyaka enesizotha ubudala wonke umuntu
Nursing amakhaya namuhla akuyona kuphela umphakathi, kodwa futhi yangasese. Institutions yalolu hlobo zibhekwa kangcono abadala abafuna ubudala ngenhlonipho. makhaya Private zinezikhathi ukunakekelwa kangcono lodgers, ezingeni lelisetulu induduzo ukwelashwa okusezingeni eliphakeme. Lapha umhlalaphansi ngeke kuphela uxhumana ontanga yabo, kodwa futhi ukuze bakwazi ukuthola ukwelashwa kudingekile.
Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi akuwona wonke umuntu angakwazi ukukhokhela okunethezeka enjalo. Uma izikhungo zombuso kukhona emikhukhwini eminyene, ezindaweni zangasese kakhulu. Iphuzu liwukuthi izindleko zokuphila: kuphakeme kakhulu. Uma unesithakazelo kangakanani ukuthola ukuphila ekhaya lasebekhulile, xhumana mnyango nemisebenzi yomphakathi, lapho uzonikwa uhlu nezikhungo zomphakathi kanye nezizimele.
Yiqiniso, abaningi bangathi wesabeka - lapho umuntu osekhulile ongumKristu uchitha nokuguga kukaJehova nendawo enjalo. Kodwa, uma sibheka le nkinga ngaphesheya: kuthiwani ngalabo umhlalaphansi abangenayo ubani nje ufuna ukuhlangana ubudala ngokwanele ubudala? eyodwa kuphela indlela yokuphuma - ekhaya lasebekhulile. Kanjani lapho, funda silula, into esemqoka - ukuze balungise amaphepha adingekayo.
Ngakho, cabanga ngezinzuzo ukuthi kungathiwa kula makhaya:
Asebekhulile emhlabeni ukunakekelwa iwashi.
Ukudla okukahle, ikakhulukazi ukudla kuphephile isidumbu impesheni.
Ukutholakala ezinamasondo ekhethekile, emibhedeni kanokusho kulabo abangakwazi ukuhamba wedwa.
ezokungcebeleka abahlukahlukene - ukuhambahamba ngishaywe umoya, izincwadi, imidlalo.
Ukuhlolwa unomphela odokotela ayisipesheli, imithi.
Ukuxhumana nontanga yabo.
Khokhela yokuhlala esikhungweni sembuso angazithola impesheni yakho.
Uma une izihlobo, bangakwazi uvakashele yimiphi impesheni ngosuku, futhi ngezinye izikhathi ngisho iye edolobheni sishaywe umoya.
Akunandaba umbuzo somphakathi noma womzalwane, ubuhlengikazi - kungcono kukho olukhulu kulabo umhlalaphansi abafuna azizwe ebalulekile futhi beqiniseka. Ukukhuluma njalo, ukunakekelwa impesheni abasebenzi kanye nezinye ukunikeza izivakashi smile ukuthi nomthelela omkhulu isimo jikelele impilo.
usizo Psychological and wezokwelapha
Wonke umuntu ongena ekhaya lasebekhulile, udinga ukunakekelwa njalo. Kepha akusikho lokho kuphela imithi kodwa futhi ngokwengqondo.
Kunoma isikhungo unezisebenzi lodokotela abanolwazi njalo ukuqapha isimo izivakashi. Futhi, ungakhohlwa mayelana lokuthi impesheni uzokwazi nganoma yisiphi isikhathi ukuze ukuxhumana nomunye. Eqinisweni-ke is a plus elikhulu. Ekhaya, bengaphakathi kwezindonga ezine, ngezinye izikhathi zinomuzwa wokuthi azilutho futhi azizwe engelutho. Ekhaya lasebekhulile ngeke. Ukukhuluma njalo uzizwe ungcono kakhulu, funda okuningi zikuthola kontanga futhi ngisho nabangane. Phela, awukwazi ngaphandle abangane, kungakhathaliseki ubudala.
Indlela bangene impesheni ekhaya lasebekhulile
kanjani bangene impesheni boarding indlu abangakwazi ngokuzimela azinakekele, ayinakho umndeni kunzima ukuhambisa? Eqinisweni, kulesi simo kuyinto. Uma ungakwazi ukufinyelela isevisi yokuxhumana nabantu, bayakwethemba angashaya ucingo nje cela ukuba eze ekhaya. Nikeza abasebenzi nawo wonke amanye amadokhumenti adingekayo ukuze yokubhalisa, futhi bonke bayokwenziwa umshado.
Ungesabi: khona nizakuhlangana ukunakekela okuhle kwezokwelapha hhayi kuphela, kodwa futhi ukwesekwa ngokwengqondo.
Indlela ukungena ekhaya lasebekhulile, it is ngaqonda kangcono. Akubalulekile ukuthi bonke abantu bakhona baye balahlwa ngemindeni yabo. Kungenzeka ukuthi umane akekho, futhi boarding indlu sashintshwa saba ikhaya lesibili. Kubantu abanjalo, kubaluleke kakhulu ukuthi bachitha ukuguga akayedwa.
Indlela ukungena ekhaya lasebekhulile futhi yini okudingeka uyenze:
Xhumana iziphathimandla zikamazisi.
Gcwalisa isicelo bese uhlole uma ukufanisa zonke zindlela.
Nquma ukuthi ubani uthola impahla yakho. Uma kungekho nezihlobo, ngemva kwalokho ukhetho engcono kungaba ukuze uthumele yezihambi impahla abhadalela yokuhlala yabo.
Linda ukubhalisa wonke amadokhumenti (ngokuvamile akuthathi isikhathi eside).
Chitha sebegugile kumbuthano ontanga yabo, ukuthola ukunakekelwa esikahle kakhulu.
Manje uyazi ukuthi ukungena ekhaya lasebekhulile, futhi kwenzani na. Ingabe wena uqobo akudingeki ube lokhu, kodwa uyazi umakhelwane enezinkinga, okuyiwona akekho anakekele, ukumsiza, imnike engu enesizotha ubudala kumbuthano lokunakekela nokuxhumana nabantu. Isakhiwo sabantu abaningi abaqashile kuyinto iyisibusiso, iyisibusiso esigabeni impesheni abafuna ukujabulela ukuphila futhi hhayi nesizungu.
Hysteroscopy. Kuyini lokhu?
Vilnius ngamazwe sezindiza